Thola iChina namakhona ayo ongeke uphuthelwe | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | China, Cultura, General, Iziqondiso, Ukuzilibazisa, Ukuhamba kwe-Asia
Mhlawumbe abaningi manje ukuthola iChinaKepha ingelinye lamazwe amadala kakhulu emhlabeni futhi inelinye lamasiko athakazelisa kakhulu. Kuyafaneleka ukuhamba nokuyazi, kepha hhayi ohambweni olulula nolusheshayo kepha ukuthatha izinto ngokungathi sína kakhulu futhi uhambe uzilungiselele ngangokunokwenzeka.
Izwe elilodwa, iChina noma elinye, lijabulisa kakhulu uma wazi okuthile ngomlando walo, amasiko alo, ukuma kwalo. Lapho wazi ukuthi ukuphi, kungani kwakhiwa into enjalo, kungani enye enjalo yenzekile. Leyo yindlela engcono kakhulu yokusondela futhi lolo hambo yilolo esilusikisela namhlanje e-Actualidad Viajes: konke odinga ukukwazi ngeChina ngaphambi kokuhamba.
1 Umlando omfushane weChina
2 Isiko lamaShayina
3 I-China geography
4 Izikhangibavakashi e China
Umlando omfushane weChina
Umlando wanoma yisiphi isizwe ufihlwe ezinkingeni zesikhathi, ku izizwe ezahlukene ziyanda kuze kube, ngokuhamba kwesikhathi, kuvuse imibuso yanamuhla, imibuso noma izizwe.
I-China ineminyaka eyizinkulungwane ezinhlanu yomlando futhi lokhu kwehlukaniswe ngezikhathi ezinhlanu: i-Primitive Society, i-Slave Society, i-Feudal Society, i-Semi-feudal kanye ne-Semi-colonial kanye ne-Socialist Society. Ngalezi zikhathi ezinhlanu kuvela amakhosi anamandla, kunezimpi zombango kanye namakhosi amaningi abusayo avela futhi awe phakathi kwamakhulu eminyaka kuze kube ukwakheka kwePeople's Republic of China ngo-1949 kanye nokugumbuqelwa unomphela kobukhosi.
Phakathi kwe Amakhosi aziwa kakhulu futhi abalulekiles, ebimise ukuthuthuka kwempucuko yaseChina, singasho amagama athi Yuan, Ming, Qing, Song neTang Dynasties. Lesi sakamuva sibe ngesinye sezici ezinhle kakhulu njengoba siholele iChina ekubeni yisizwe esinamandla nesicebile, futhi kwenzeka okufanayo eMing Dynasty, okuyisikhathi lapho ubungxiwankulu baqala khona ukuthuthuka eChina kanye nasembonini yezobumba ekugcineni ukufudukela emadolobheni okuthandwayo nezimakethe, izinyathelo ezisendleleni eya emphakathini wanamuhla.
UMbusi Wokugcina waseChina
Ubukhosi bokugcina baseChina kwakunguQing, umbusi wakhe, uPu Yi, owangena emlandweni ngokuba ngu-The Last Emperor of China ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX.
Sonke siyazi ukuthi isiko lamaShayina lihle kakhulu. Ubuciko nobuciko baseChina kungamagugu amabili abaluleke kakhulu. Kule minyaka eyizinkulungwane ezinhlanu zomlando, izingcweti zaseChina azenzanga lutho ngaphandle kokudala izimangaliso nganoma yini ababenayo ezandleni zabo. Banikeze nempilo kuma-opera amnandi, umculo oyingqayizivele futhi ongafi, babonakalisile kumuntu, enkolweni futhi babheka ngobuciko izinkanyezi nokunyakaza kwazo.
El Chinese jade, ubuciko bensimbi obaziwa ngokuthi i-cloisonne, izitsha zethusi, i i-Chinese calligraphy, the imifekethiso, amathoyizi abantu, comets eyenziwe ngephepha noqalo, imikhumbi ene-lacquered ngemibala ehlukahlukene.
Futhi i izitembu Chinese ezenziwe ngensimbi, ijeyidi, amazinyo ezilwane noma izimpondo, i- unodoli Theatre futhi, usilika nayo yonke imikhiqizo etholakala ochungechungeni lukasilika umbungu ongaluka ngezinsuku ezingama-28 zokuphila kwayo. Konke lokhu kuyingxenye yamagugu amasiko amaShayina.
Namuhla, izincwadi zesayensi nemithi ziyanothiswa yileli siko kanti ezinye zezinto ezizivezayo zibe yizipho ezinhle zokulethwa emndenini nakubangani bethu.
Ngemephu ye-Asia esandleni sikubona lokho I-China izwe kakhulu ohamba cishe amakhilomitha ayizinkulungwane ezinhlanu. Ihlukaniswe izifunda ezinhlanu: i-East China, ihlukaniswe yaba izifunda ezintathu, iTibet neXinjiang - iMongolia.
Ijografi yaseChina ihluke kakhulu futhi inayo izintaba, iziqhingi, izinguzunga zeqhwa, amagquma, izindunduma, indawo ye-karst, i-calderas yentaba-mlilo, amabhishi namahlathi. Ngaphezu kwalokho, emazweni aseTibetan kunjalo intaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni, i- INtaba i-Everest (cishe amamitha ayizinkulungwane eziyi-9 ukuphakama), ezungezwe ezinye izintaba eziphakeme, yingakho le ndawo yaziwa ngokuthi "uphahla lomhlaba."
I-China inemifula eyizinkulungwane ezingama-50 futhi iningi ligelezela ePacific. I- UMfula iYangtze Ungumfula obaluleke kakhulu, onamakhilomitha angama-6300 ngemuva kwe-Amazon neNayile. Idamu elidumile i-Three Gorges Dam, isimangaliso sobunjiniyela banamuhla, lakhiwe kulo. Kukhona futhi i- UMfula Ophuzi ngamakhilomitha angaphezu kweziyizinkulungwane ezinhlanu zokwelulwa. Emaphethelweni nasemifuleni, impucuko yaseChina ibilokhu ikhula.
Kumele kushiwo ukuthi njengoba iChina iyizwe elikhulu kangaka kunezimo zezulu ezahlukahlukene futhi lokho kuvumela ukuthi kube khona izimbali nezilwane ezahlukahlukene lapho ngasinye salezi zifunda. Yingakho kukhona kokubili amakamela namahhashi afana nezingwe, izinkawu, izimpisi, izinhlwathi noma ama-pandas.
Izikhangibavakashi e China
Izivakashi eziningi zigxilwe engxenyeni eyodwa kuphela yeChina: IBeijing, iXian, iShanghai, iHong Kong. Ngiyaziqonda, yizindawo ezilula ukujoyina futhi ezinokuheha okuningi kwabavakashi. Kepha iChina inkulu, ngakho-ke uma womele i-adventure, okuhle ukuthi ulahlekelwe yinyanga yonke futhi uzimisele ukuhamba ibanga elide.
EBeijing asikwazi ukuphuthelwa yi Idolobha Elinqatshelwe, idolobha lasebukhosini elidala elinamakhulu ezakhiwo nezinkulungwane zamahholo. Ngincoma ukubuka i-movie ngaphambilini UMbusi wokugcina Yebo, yaqoshwa khona lapho futhi isinika isifundo esihle ekwakhiweni kwezakhiwo nomlando.
Kunjalo futhi Isikwele seTinanamen, the Mausoleum kaMao, the Inkundla Kazwelonke, the Ithempeli laseZulwini, Amathuna eMing, the Isigodlo sasehlobo, izingxenye ze- Udonga lwaseChina lokho kusondele futhi ama-hutong, iChinatown yendabuko yemigwaqo emincane nezindlu ezindala ezinamagceke.
En i-Hong Kong, ogwini oluseningizimu-mpumalanga yeChina, kufanele uvakashele IVictoria Bay ukucabanga ngomhlaba wamabhilidi, IVictoria Peak, igquma elingafinyelelwa yi-tram, i- I-Avenue yezinkanyezi, the Ithempeli laseWong Tai Sin, Icaseway Bay, Repulse Bay bese uhamba nje uhambe.
En Shanghai umgwaqo omuhle kunayo yonke ngu Umgwaqo uNanjing. Kukhona iMnyuziyamu yaseShanghai, i- EMpumalanga Pearl Tower, the Ithempeli laseJade Buddha, iBund Nensimu enhle yaseYuyuan. Njengokuvakasha ngincoma ukuthi ungaphuthelwa "amadolobha amanzi" wekhulu leminyaka Qibao y UZhujiajiao.
Okwemvelo ejwayelekile yamaShayina kunjalo Guilin: amagquma, amachibi, imifula, amahlathi oqalo, imihume emikhulu. EGuilin izivakashi ziyi Umgede Womtshingo Obomvu, lo Indlovu Yomboko Wendlovu, iPaki Yezinkanyezi Eziyisikhombisa, amasimu erayisi kanye nohambo lokuhamba ngomkhumbi emfuleni iLi.
Xian idolobha elineminyaka engaphezu kwezinkulungwane ezintathu zomlando futhi okuhehayo kulo kufaka: Amaqhawe eTerracotta, izindonga zangesikhathi esidlule ezigcinwe kahle eChina, iBell Tower, iThempeli laseFamen, iGiant Goose Pagoda, isigodlo saseTang kanye namangcwaba ambalwa ombukiso wedynastic.
I-Tibet Kuyisifunda esizimele futhi kudingeka imvume ekhethekile ukungena. Uma usungaphakathi kokuhambela okuyimpoqo kukhona Lhasa, inhlokodolobha, nemigwaqo yayo namathempeli ayo: iSera, iGanden neDeprung, ikakhulukazi. Futhi ungayeki ukuya kuye Ichibi lasezulwini, ichibi elingcwele elisendaweni ephakeme ngamamitha angu-4720.
Kunomunye umuzi waseTibet obizwa ngokuthi Shigatse Kuyafaneleka ukwazi kanye neTashihunpo Monastery kanye neShalu kwasekuqaleni. Kukhona futhi i- Isigodlo sePanchen Lama.
Uma kumayelana namabhishi amahle kufanele wazi ISanya, idolobha elisogwini ovela esifundazweni saseHainan esazi ukuhlanganisa kahle izintaba, ulwandle, imifula, idolobha namabhishi. Ukulandela ogwini kuyinto Xiamen, kodwa esifundazweni saseFujian, elinye lamadolobha echweba abaluleke kakhulu eChina amakhulu eminyaka.
Futhi ukulahleka eChina ayikho into efana nayo IMongolia yangaphakathi. Kuyisifunda esizimele esiphakathi kweRiphabhlikhi yaseMongolia neRussia. Yisifundazwe saseShayina esibanzi kunazo zonke nesesithathu ngosayizi. Inabemi abayizigidi ezingama-24 nezinhlanga eziningana.
Njengoba isimo sezulu sihluka kakhulu phakathi nonyaka, kungakuhle ukuthi ugweme ubusika obubandayo nobude futhi usebenzise ihlobo, yize lifushane, lifudumele. Yizwe lase Genghis Khan ngakho-ke kukhona iGenghis Khan Museum, kepha kukhona namathempeli, ama-pagodas nezindawo eziluhlaza eziluhlaza nezibanzi lapho izivakashi zingakwazi khona uhlangabezana nendlela yokuphila yamaMongolia yokuhambahamba. Ubumnandi.
Iqiniso ukuthi iChina yizwe elihehayo futhi ngishoda ngakho konke engikutshelile, kepha yilokho kanye okwenza ikhetheke: akunandaba ukuthi bakutshela kangakanani, ufunda kangakanani, ubuka izithombe ezingaki . I-China izohlala iba ngaphezulu lapho ekugcineni uyivakashela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » China » Amanye amaqiniso athakazelisayo ngeChina: umlando, isiko, ukuma kwezwe nokuheha
Ana Azzano kusho
Imibono yakho ilusizo kakhulu, sengizoya eChina ngo-Ephreli, ngizozibheka
Phendula ku-ana azzano
Yini ongayibona eLiechtenstein
IPerito Moreno Glacier emangalisayo, e-Argentina